तनाव भैरहेको छ भने यी खानेकुरा खानुहोस तनाव फ्याट्टै हट्छ !! – Samachar Pati
तनाव भैरहेको छ भने यी खानेकुरा खानुहोस तनाव फ्याट्टै हट्छ !!
मानिसहरु आफू तनावमा रहेको कुरा सजिलैगरी भन्न सक्छन्– मलाई टेन्सन छ। तर त्यो तनाबको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसारमा गम्भीर खालका रोगीको संख्या थपिदै गएको छ। चिकित्सकहरु पेटमा हुने अल्सरदेखि, धेरै गम्भीर रोगको कारण बन्ने उच्चरक्तचाप, चिनीरोगदेखि मतिष्कघात र पक्षघातको प्रमुख कारण तनाव बन्दै गएको बताउँछन्।
व्यस्त दैनिकी, अस्वास्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता र अनेक प्रकारका झमेलाका कारणमा मानिसले चैनका जिन्दगी विताउँन नपाउनु तनाबको प्रमुख कारण हो। विभिन्न प्रविधिका कारण थपिदोँ सुविधाभोग गर्दा मानिसमा तनाब थपिँदो छ। जीवनशैली र दैनिकी बिग्रीदाँ मानिसमा अनिद्रा, चिन्तारोग, दिक्दारीपन, एक्लोपनाजस्ता समस्या पनि थपिदै गएको छ ।
जुन प्रत्यक्ष रुपमा उच्च रक्तचाप, अल्सर, चर्म रोग र कम उमेरमै मुटु रोगको कारण हो। ती बाहेक खानेकुरामा प्रयोग गरिने रसायनिक पदार्थहरु, जवरजस्ती पकाइएका फलफूल, फास्टफुड, स्वाच्छ पिउँने पानीको अभाव र दुषित हावाले पनि तनावबृद्धिमा सहयोग पुर्‍याइरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसो त तनाव कम गर्न यी खानेकुरा खानुहोस तनाव झ्याप्पै हट्छ । भिडियो हेर्नुहोस स्
रामजी खाड र प्रिती आलेको बेजोड अभिनय (भिडियो)
गायिका निर्मला थापा मगरको नयाँ पप गीत “भमरा” बजारमा